Aung's Investment: 7/18/10 - 7/25/10
Microsoft MSFT - Buy
Microsoft (MSFT)ဟာ ဒီနေ့ည ဈေးပိတ်အပြီးမှာ June Quarter Earningကို Reportလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ Microsoftကို ဘာလို့ဝယ်သင့်သလည်းဆိုတာ တိုတိုနဲ့လိုရင်းပဲ အောက်မှာရေးထားပါတယ်။
Intelနဲ့ AMDဟာ very impressive earningsတွေကို Reportလုပ်ပြီးသွားပါပြီ။ Chip makerတွေရဲ့ အခြေအနေကောင်းရင် PC salesဟာ အခြေအနေကောင်းနိုင်ဖို့ အရမ်းProbablilityကောင်းပါတယ်။ PC salesကောင်းရင် Windows 7ရဲ့ Salesဟာလည်း Automaticကောင်းမှာပါ။
Microsoftဟာ X-box console အသစ်ကိုလည်း ဒီChristmasမတိုင်ခင် ထုတ်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Windows 7ရဲ့ Reputationဟာလည်း Vistaထက်အများကြီး ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါတွေကြောင့် Microsoftရဲ့ Business Outlookဟာ Gloom and Doomဖြစ်ဖို့ Chanceအရမ်းနည်းပါတယ်။
မနှစ်ကကျွန်တော် Microsoftကို တခါRecommendလုပ်ဖူးပါတယ်။ Market Correctionဖြစ်လို့ အခုဆိုရင် Microsoftဟာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ Entry Priceထက်တောင် ပေါပါသေးတယ်။ ဒီအခွင့်အရေးကို အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင် Microsoftနဲ့ နောက်တစ်ခါ အမြတ်အစွန်းလေး ကောင်းကောင်းရနိုင်ပါတယ်။ Technical အသေးစိတ်ကိုတော့ Chartထဲမှာပဲ ထပ်ရေးထားပါတယ်။
Heavy-weight data coming out tonight and tomorrow. Ben Bernankeဟာ ဒီနေ့ည ဒုတိယနေ့အနေနဲ့ Washingtonမှာ Senate Committeeနဲ့ ထပ်တွေ့ပါမယ်။ ဒီနေ့ညမှာ ထုံးစံအတိုင်း Weekly Jobless Claims ထွက်ပါမယ်။ Existing Home Salesလည်း ထွက်ပါမယ်။ European Bank Stress Test Resultsတွေဟာလည်း ဒီနေ့ည (သို့) မနက်ဖြန်မှာ ထွက်လာပါမယ်။ ဒါဟာ Major Newsပါ။ ဒါလေးတွေကိုလည်း စောင့်ကြည့်ပြီး Microsoft (MSFT)ကို Earningမထွက်လာခင် 26အောက် (25.5အောက်ရရင် ပိုတန်ပါတယ်)လောက်မှာ ဝယ်ပါလို့ Recommendလုပ်ပါကြောင်း။
SAI : I hope you sold MSFT when I recommended to sell stocks back in April 2010. Enter again tonight.
Posted by Aung Myo Htet at 7/22/2010 09:20:00 PM0comments
Labels: earnings, Microsoft, MSFT